ဗီဒီယို - ပြInnovနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကိုရရှိသည် Martech Zone
စနေနေ့, ဧပြီ 16, 2011 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
သောကြာနေ့မှာ Compendium ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ Blake Matheny မှတည်ထောင်သူ Chris Baggott နှင့် Sales VP Scott Blezcinski တို့၏အကြံအစည်ဖြင့်သမ္မတဖရန့်ဒေးလ်၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ကုမ္ပဏီသည်အလုပ်မှ“ အချိန်” ယူပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတစ်ရက်မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ခရစ်သည်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်မည်သို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပုံကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုပြသနာကိုဖော်ထုတ်ပြီးနောက်အခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် - အတိအကျ.
သူ၏ဇာတ်လမ်း၏သော့ချက်မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်အေးမြသောအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မဟုတ်ပါ။ ပြIt'sနာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အဖြေတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်အတွင်း Compendium ရှိအဖွဲ့သုံးဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာ ၃ ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အဖွဲ့များသည်အဓိကဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့၏အကူအညီကိုရယူရန်၊ အကြံဥာဏ်များကိုထိုးဖောက်ရန်နှင့်စီးပွားရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ငါဖြေရှင်းနည်းများကိုမျှဝေလို့မရပါဘူး - တစ်ခုချင်းစီဟာသူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ အားလုံးတစ်ရက်ထဲမှာ!
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဤကဲ့သို့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတက်ကြွစွာအားပေးပါသလား။ သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်သင်၏အဖွဲ့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါကသင်၏စီးပွားရေး၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားပြန်လည်အားဖြည့်ရန်နှင့်စျေးကွက်အတွက်အမှန်တကယ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်နှင့်ပေါင်းစည်းမည်ကိုသံသယမရှိပါ။
ထုတ်ဖော် - ကျွန်ုပ်သည် Compendium တွင်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ဖောက်သည်များအားဆက်လက်ကူညီပေးနေသည်။ Blake သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လုံ့လဝီရိယရှိသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Highbridge.
Tags: Blake mathenyChris baggottအကျဉ်းချုပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး